IOS7(Cydia) को लागि उत्तम थिमहरू आईफोन समाचार
आईओएस the को उपस्थिति परिमार्जन गर्नु नै धेरैले जेलब्रेक प्रदर्शन गर्ने एक मात्र कारण हो। Cydia मा उपलब्ध थिमहरूको संख्या यति ठूलो छ कि तपाईंको उपकरणको लागि एउटा छनौट गर्न गाह्रो छ। हामीले कुल दस गीतहरू चयन गरेका छौं जुन हामी विश्वास गर्छौं सब भन्दा राम्रो हो र हामी तपाईंलाई ती कुराहरू देखाउनेछौं ताकि तपाईं आफ्नो निर्णय लिन सक्नुहुनेछ। सबै स्वादका लागि त्यहाँ केही छ: न्यूनतम र विस्तृत, नि: शुल्क र भुक्तान। हामी सम्झन्छौं कि यी थिमहरू स्थापना गर्न सक्षम हुन विन्टरबोर्ड स्थापना हुनु आवश्यक छ, र ती मध्ये केहीसँग विजेटहरू र अन्य तत्वहरू जस्ता अतिरिक्त छन् जुन विषयवस्तुहरूलाई पूर्णरूपमा पूरक छन्।
5 जाऊ त्यहाँ
63All सबै
म सबैभन्दा धेरै मनपर्ने एकबाट सुरू गर्छु। आभा एक निःशुल्क विषयवस्तु हो जुन आईओएस the को फ्ल्याट डिजाइनसँग मिल्छ र धेरै नरम रंगहरू र आइकनहरूमा विवरणहरू थप गर्दछ, जसले यसलाई सन्तुलित विषयवस्तु बनाउँदछ जुन लगभग सबैलाई मनपर्दछ। आइकनहरू पनि सानो र गोलाकार हुन्छन्, र यसमा २०० भन्दा बढी डिजाईन गरिएको आइकनहरू छन्, त्यसैले अनुप्रयोगहरूको विशाल बहुमत जुन तपाईंले आफ्नो उपकरणमा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूको सम्बन्धित आइकन हुनेछ। समावेश नगरेका आईकनहरू नयाँ आकार र आकारमा अनुकूलित हुनेछन्, त्यसैले तिनीहरू ध्यान नखोल्नेछन्। यो विकासकर्ताको रेपोमा नि: शुल्क छ: http://cydia.myrepospace.com/iApexthemes
अर्को धेरै को मनपर्ने, तर संग न्यूनतम डिजाइन। यस विषयवस्तुको साथ तपाईको आईफोनमा स्किममोर्फिज्म फिर्ता हुन्छ जुन तपाईंको स्प्रिबोर्डबोर्ड आईकनहरू विवरणहरूको साथ भर्दछ। यो Cydia मा $ २.2.99। मा उपलब्ध छ।
एक न्यूनतम विषयवस्तु जीवन्त र colors्गहरू र आइकनहरू जसले राहतको केहि प्राप्त गर्दछन्। योसँग धेरै अनुकूलित आइकनहरू पनि छन्, र तपाईंसँग यो $ २.2,99। को लागि उपलब्ध छ।
निर्दोषले आईओएस आईकनहरूको शैली पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दछ। सानो सावधानीपूर्वक तल सावधान डिजाइन, राहतसहितका आईकनहरू, र सेतो र रातोको एक प्रमुखता। समस्या जुन मैले यो शीर्षकको साथ देख्दछु ती ती आईकनहरू अनुकूलित छैनन् (जुन त्यहाँ छन् र धेरै) धेरै धुन बाहिर, जसले धेरै शोनेसलाई हटाउँदछ। यसको मूल्य $ २.2,99। छ।
अर्को विषयवस्तु फ्ल्याट डिजाइन तर कम चमकदार र less्गहरूको साथ जुन हामी पहिले देख्यौं। यसले स्थिति पट्टिका लागि परिमार्जन पनि समावेश गर्दछ, कभरेज र वाइफाइ बारहरूमा देख्न सकिन्छ। यसको मूल्य, $ २।
3 All सबै
एक विषयवस्तु आईओएस from भन्दा पूर्ण भिन्न। यदि तपाइँ मूलगामी परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने, यो तपाइँको छनौट हुन सक्छ। एक गाढा र colorsहरू र मूलबाट पूर्ण भिन्न डिजाइनहरूका साथ आईकनहरू नि: शुल्क विषयवस्तुमा।
Mojo आईओएस of को शैली पुन: प्राप्त गर्नुहोस्यद्यपि नयाँ एप्पल प्रणालीको विवरण राख्दै। यस्तो स्वतन्त्र परिवर्तनहरू नचाहनेहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्ने एक निःशुल्क विकल्प।
आईओएस of को शैलीमा एक उत्कृष्ट थिम, तर साथ अझ सरल आइकन र अधिक ज्वलन्त रंगहरू। साथै, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र।
अघिल्लो भन्दा विपरित, टोस्टले अधिक म्युट रंग प्रदान गर्दछ, तर अघिल्लो जस्तै, अधिकतम गर्न एक सरल आइकन डिजाइन। यो नि: शुल्क छैन, तर $ २.2,50० को मूल्य हो।
अल्ट्राफ्लाटले आईओएस of को समान डिजाइन प्रदान गर्दछ, धेरै समान आईकनहरूको साथ, जसको मतलब यदि कुनै आईकन परिमार्जन गरिएको छैन भने, तपाईंले मुश्किलले फरक देख्नुहुनेछ। नि: शुल्क उपलब्ध।
थप जानकारी - आइकनले आईओएस ((साइडिया) मा स्किमोरफिजम पुन: प्राप्ति गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » आईओएस ((सिडिया) को लागि उत्तम थिमहरू
अब्राहम सेभालोस @ (@abiangelito) भन्यो
ठिकै छ, आभा मेरो लागि नि: शुल्क देखा पर्दैन? .. म केवल that २.2,99 costs को लागत देख्छु र निस्सन्देह त्यहाँ अन्य रिपोमा पनि त्यहि नै नि: शुल्क छ, तर मैले कल्पना गरे कि यो मूल स्वतन्त्र छ, हुनसक्छ सायद यो भन्दा पहिले। ।
अब्राहम सेभालोसलाई जवाफ दिनुहोस् @ (@abiangelito)
लेख पढ्नुहोस्, म रेपो इंगित गर्दछ कि तपाइँ यसलाई सित्तैमा स्थापना गर्न को लागी जोड्नु पर्छ।
हाहाहा यदि मैले यसलाई पूर्ण रूपमा पढें भने, मसँग यो पहिले नै स्थापित छ धेरै धेरै धन्यबाद, विषयवस्तु उत्कृष्ट छ।
कलरब्याजेसका साथ संयोजन गरिएको नरम रिमिक्स एक धेरै राम्रो विकल्प हो, साना आइकनहरू र धेरै राम्रो अनुकूलितहरू, र ती गर्दैनन्, किनभने तिनीहरू पनि साना हुन्छन् र टकराउँदैनन्, मेरो रायमा यो सबै भन्दा राम्रो र मेरो मनपर्ने हो।
मलाई थाहा थिएन ... धेरै राम्रा हेराईमा त्यो थिम छ
बालटासर लोलोपिस पेरेज भन्यो
मैले Aura र आइकन प्याक स्थापना गरेको छु http://cydia.myrepospace.com/iApexthemes र केहि परिवर्तन हुँदैन। 🙁
Baltasar Llopis Pérez लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले विन्टरबोर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र यसलाई सक्रिय गर्नुपर्नेछ।
जिज्ञासु, यो Iphonehackstv द्वारा बनाईएको सूची जस्तै देखिन्छ तर कम पूर्ण ... तपाईलाई थाहा छ मेरो मतलब के हो?
जिज्ञासु? कुनै हालतमा हुदैन। जस्तो कि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, म मेरो दिनलाई सबैभन्दा अधिक मन पराउने कुरा जान्न विन्टरबोर्ड थिमको परीक्षणमा व्यतीत गर्दिन। म यहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्छु, त्यहाँबाट, म एउटा प्रयास गर्छु, अर्को प्रयास गर्छु ... के तपाईंले स्क्रीनशटहरू देख्नुभयो? के तिनीहरू ब्लगबाट आएका हुन्? होईन, तिनीहरू मेरो हुन्, मैले थपेका प्रत्येक थिमको परीक्षण गर्दै।
र अनीक v2 ?????
Jandroav लाई जवाफ दिनुहोस्
अनिक र अनिकोन दुई गीतहरू थिए जुन मैले प्रयास गरें, तर अन्तमा मैले १० छनौट गरें र ती छोडेर गए। तर ती पनि धेरै राम्रो गीत हो।
एक प्रश्न, आइकनको क्याप्चरमा ... थिमको कुन चिम्ट वा विकल्प तपाईले सक्रिय गर्नुभयो यस प्रकारको ब्याजहरू पाउन?
यसलाई कलरब्याजेज भनिन्छ र तपाईंसँग यो साइडियामा पहिले नै उपलब्ध छ। 😉
के तपाईंले FolderEnhancer को साथ ब्याट्री नाली याद गर्नुभयो? यदि मैले फोल्डरमा r प r्क्ति र ic आइकन राखे, उसले त्यो पिउँछ।
वा तपाईं स्प्रिन्टोमाइज प्रयोग गर्नुहुन्छ?
डाउन्डेलाई जवाफ दिनुहोस्
म अहिले स्प्रिंगटमाइज प्रयोग गर्दिन। FolderEnhancer को रूपमा, मैले यो बढि बढाइएको ब्याट्री ड्रेन देखेको छैन किनकि मैले यसलाई प्रयोग गरेको छु ...
उत्तरको लागि धन्यबाद
म यो के हुन सक्छ देख्नेछु।
सबै भन्दा राम्रो 1derful छ जुन शीर्षमा छैन र यदि यो अधिक पूर्ण छ भने केवल यस्तै आईकनहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
स्क्रीनशटमा बधाई छ तर ... यदि तपाईंले फन्ट राख्नुभएन भने, यो केहि कुरूप छ, हैन? ध्यानमा राख्दै कि शीर्ष १० शीर्षकहरू अरु कसैले छनौट गरेको आधारमा हुन्छन् र अन्य तरिकाले छैन।
उमर मेलगर भन्यो
जब म "निर्दोष HD" स्थापना गर्न चाहन्छु म "com.idd.iconomatic" भन्ने निर्भरतामा समस्या भोग्छु। त्रुटि समाधान गर्न म के गर्ने?
उमर मेलगरलाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले आइट्यून्स जडान पुनः डिजाइन गर्दछ